Indlu ngaselwandle - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguIngrid
Khawucinge ngokuvuka, into yokuqala oyibonayo ziintaba ezintle eziqala kwiimitha eziyi-700 ukusuka elwandle, le yenye yezinto esinokuzinikela. Singabantu abadala abaqeshisa ngegumbi elincinci elihle endlwini yethu kubakhenkethi nabantu abathanda izinto ezingaqhelekanga abafuna ukubuka nokubona isiqithi sethu esihle, uSenja. Iindawo ezikule ndlu zintle kunye namathuba angaphandle anokunikwa nguSenja, kukho yonke into ukususela ekunyukeni intaba, ukutyibilika ekhephini, ukubuka indawo kunye nolwandle. Wamkelekile!
Le ndlu ikwisiqithi sesibini ngobukhulu eNorway ekuthiwa nguSenja kunye nesiteketiso esithi "isiqithi sokuzonwabisa". Le ndlu ikwidolophana encinci ekuthiwa yiSenjahopen kumantla weSenja kunye neentaba kunye neentaba ukuba nje amehlo ayabona. Kufuphi nendlu kukho ivenkile yokutya kunye nendawo yokutyela eneofisi yeposi.
4.88 · Izimvo eziyi-88
Sihlala kwindawo ethe cwaka nefudumeleyo nengqongwe yindalo entle.
Mna nomyeni wam sihlala endlwini ngoxa sineendwendwe zethu apha, kodwa asiyi kukukhathaza ngaphezu kokuba kufuneka sikwenze okanye ufuna ukwenza loo nto. Sinobubele kakhulu ibe siza kwenza konke okusemandleni ethu ukubonisa ububele bethu kuwe size senze ukuhlala kwakho kube mnandi kangangoko kunokwenzeka.
Mna nomyeni wam sihlala endlwini ngoxa sineendwendwe zethu apha, kodwa asiyi kukukhathaza ngaphezu kokuba kufuneka sikwenze okanye ufuna ukwenza loo nto. Sinobubele kakhulu ibe siz…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Senjahopen